Qaramada Midoobay oo soo dhaweysay booqashada Madaxweynaha Soomaaliya Baydhabo Janaay. – idalenews.com
Wakiilka gaarka ah ee Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya Nicholas Kay ayaa soo dhaweeyay Booqashada uu Madaxweynaah Soomaaliya booqday Magaalada Baydhabo ee Xarunta gobalka Baay si uu ula kulmo Dadka iska soo horjeeda ee ku howlan Samaynta Maamul gobaleedyadda ee kuwada sugan Magaalada Baydhabo.
Nicholas Kay ayaa xusay in Qaramada Midoobay ay sii wadi doonto tageerada ay siiso dowlada Federaalka Soomaaliya iyo dadaalada ay dowlada ugu jirto la tashiyadda ay la galayso Siyaasiinta iyo odayaal dhaqameedyadda ku sugan Magaalada Baydhabo sidii xal diblomasiyadeed loogu heli lahaa ismarinwaaga ka taagan Magaalada Baydhabo ee Xarunta gobalka Baay.
Wakilka Qaramada Midoobay Soomaaliya u qaabilsan Nicholas Kay oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in booqashada Magaalada Baydhabo ay ku tageen Masuuliyiinta ugu saraysa dowlada Soomaaliya ay muujinayso sidii xal nabadeed loogu heli laha arinta baydhabo iyo sidii loo sii xoojinlahaa Nabada gobalka o dhan.
Kay ayaa ugu danbayn ugu baaqay dhamaan dadka isku haya Magaalada Baydhabo in ay la shaqeeyaan dowlada Soomaaliya six al Nabadeed oo wax ku ool loogu heli lahaa, xiisadaha maalmihii danbe baydhabo ka taagnaa,loogana fogan lahaa ficilo wiiqi kara Nabada iyo Xasiloonida Soomaaliya, waxa uuna xusay in iyaga oo la shaqaynaya Urur gobaleedka IGAD ay horay ugu sii wadi donaan waanwaanta iyo dhisida Maamul gobaleedyo oo dowlada Soomaaliya ay gar wadeen ka tahay .
Madaxweynaha Kenya Oo Arimaha Soomaaliya Kala Hadlaya Madaxda Wadamo Uu Booqanayo.